Warsidaha TPCH - Abriil 2022 - Wadashaqeynta Tucson Pima si loo soo afjaro Hoyla'aanta
by	Jason Thorpe	/ Isniin, 04 Abriil 2022	/ Published in Ogeysiis laba-toddobaadle ah, Community, Featured, Hada Farxad
TPCH NEWS - Abriil 4, 2022
Kulanka Xubinimada TPCH - Maajo 12
Ku biir TPCH kulanka xubinnimada saddex biloodlaha ah (Golaha Guud) ee Meey 12, 2022. Faafida COVID-19 ee socota awgeed, shirkan waxa la qaban doonaa si dhab ah.
Golaha Guud ee TPCH
May 12, 2022 - 3pm-5pm
Riix halkan si aad isu diiwaan geliso.
Ka-qaybgalka shirarka xubinnimada saddexdii biloodba mar waxay muhiim u tahay awoodda xubnaha si ay u sii wadaan heerka codbixinta ee TPCH waxayna siisaa fursad muhiim ah oo lagu saameeyo jawaabta bulshadeena ee hoy la'aanta.
KGUN 9 ayaa iftiimisay adeegyada waxbarashada ee dhalinyarada ay la kulmaan guri la'aanta
"Waxaan leennahay dhallinyaro aan lala socon oo dibadda jooga, waxaan leenahay qoysas ay soo wajahday hoy la'aan gebi ahaanba."
Guddoomiye ku xigeenka guddiga TPCH ee CoC Jocelyn Muzzin ayaa KGUN 9 kala hadashay shaqada muhiimka ah ee la qabanayo si looga hortago loona soo afjaro hoy la'aanta dhalinyarada iyadoo lala kaashanayo degmooyinka koonfurta Arizona. Guji sawirka hoose si aad u akhrido maqaalka.
Cadaalada Shaqo ee Adeegyada Bulshada Guul
TPCH waxay jeclaan lahayd inay u mahadceliso Degmada Pima One Stop, ka Magaalada Tucson Waaxda Guriyeynta iyo Horumarinta Bulshada, Iyo 24 hay'adaha dawladda iyo kuwa aan macaash doonka ahayn ee ka qaybqaatay si loo suurtogeliyo Bandhiga Shaqo ee Adeegga Bulshada.
Iyadoo in ka badan boqol qof oo shaqo doon ah ay ku hawlanaayeen, bandhigga shaqadu wuxuu ahaa guul!
Isbahaysiga Qaranku si uu u soo afjaro Hoyla'aanta ayaa si degdeg ah u siidaaya Qalabka Dib u-guryaynta
Isbahaysiga ayaa hadda soo saaray nooc cusub oo la cusboonaysiiyay Qalabka Dib-u-guryaynta Degdegga ah. Qalabku wuxuu bixiyaa fikrado cusub, hagitaan, iyo agab tixraac si loo muujiyo qaybaha ugu muhiimsan ee Dib-u-guryaynta Degdegga ah (RRH): aqoonsiga guriyeynta; caawimada kirada iyo guuritaanka; iyo maareynta kiisaska iyo adeegyada.
Bixiyeyaasha, maalgeliyayaasha, hogaamiyayaasha gobolka, iyo isbahaysigu waxay isticmaali karaan Qalabka Dib-u-guryaynta Degdega ah si ay u qoto dheereeyaan fahamkooda RRH oo ay ku dhex daraan dhaqamadan ugu wanaagsan bulshadooda.
Madasha Bulshada: Waxqabadka Nidaamka TPCH iyo Isbeddellada Guri La'aanta
Iyadoo la tixraacayo oggolaanshaha HUD ee codsiga TPCH ee ah in la qabto tirinta Waqtiga aan gabalka lahayn ee 2022 iyadoo la isticmaalayo xog kale, Madasha Bulshada ee Waxqabadka Nidaamka TPCH iyo Isbeddellada Hoyla'aanta, oo markii hore loo qorsheeyay Abriil 7, ayaa dib loo qorsheeyay Abriil 22 si loogu daro Waxqabadka ugu dambeeya ee Nidaamka iyo Xogta Waqtiga.
Ku biir TPCH si aad u hesho warar cusub oo ku saabsan shaqada lagu joojinayo guri la'aanta
Abriil 22, 2022 - 10:30 subaxnimo-12 galabnimo
Riix halkan si loo diiwaan geliyo.
Sannad kasta, TPCH waxay soo gudbisaa Waxqabadka Nidaamka, Wakhtiga Wakhtiga, iyo Warbixinta Falanqaynta Nidaamka Dheeraadka ah ee Waaxda Guryaha iyo Horumarinta Magaalooyinka ee Maraykanka.
Warbixinahani waxay bixiyaan aragti macno leh oo ku saabsan waxqabadka iyo waxtarka nidaamka jawaabta guri la'aanta maxalliga ah, u oggolaanaya falanqaynta xogta maxalliga ah ee la xidhiidha tirada dadka ay la kulmaan hoy la'aanta, tirada dadka ay la kulma hoy la'aanta markii ugu horreysay, iyo natiijooyinka guriyeynta maxalliga ah iyo adeegga taageerada barnaamijyada.
Ku biir TPCH 22-da Abriil soo bandhigid 90-daqiiqo ah oo ku saabsan natiijooyinka xogta sanadkan iyo ka doodista fursadaha lagu sii wanaajinayo waxtarka iyo hufnaanta shaqada bulshadeena si looga hortago loona soo afjaro guri la'aanta.
Isdiiwaan gelinta ka hor ayaa loo baahan yahay. Is diwaan galinta ka dib, waxa aad heli doonta fariin iswada oo ka kooban xidhiidhka si aad u gasho golaha bulshada
Kooban Kulanka Guddida TPCH CoC
Guddiga TPCH CoC ayaa kulmay Talaadadii, Maarso 22 waxayna ka wada hadleen isbeddelada saameyn doona adeegyada dadka ay haysato hoy la'aanta. Go’aamadan waxaa ka mid ahaa:
Isku dayga Guriyeynta Si Loo Helo (HATL) siyaasadda waa la hakiyay inta laga helayo natiijada SB1581. Sharciga gobolka ee la soo jeediyay wuxuu dhigayaa xeryo la mamnuucay oo loogu talagalay dadka ay soo food saartay guri la'aanta iyadoo shuruud looga dhigayo in waaxaha booliisku ay qabtaan dadka hurda meel ka baxsan meelaha loo cayimay. Isku dayga Guriyeynta ee Helitaanka siyaasadda waxay ku lug lahayd la tashi ka dhexeeya daneeyayaal badan, guddiyo, sharci fulinta iyo dadka leh khibrad guri la'aan. Waxay ogaysiisaa sharci fulinta marka qof leeyahay guri guri oo ay ka caawiso helida guryahaas. Marka la eego SB1581, waa in tixgalin cusub laga qaadaa sida sharci fulinta loogu baahan doono si ay ula falgalaan dadka ay soo food saartay guri la'aanta.
Karen Fogas (Magaalada Tucson) iyo Yvette Gonzales (Degmada Pima) ayaa loo magacaabay inay ku biiraan Phil Pierce (Old Pueblo Community Services) oo matalaya Tucson/Pima County ee Gobolka Arizona Xogta Warehouse Workgroup si ay u sahamiyaan isuduwidda daryeelka ee dhowr hay'adood oo gobolka ah.
La cusboonaysiiyay siyaasadaha gelitaanka la isku dubariday ee la xidhiidha shirarka kiiska iyo tixraacyada gelitaanka ee la isku dubariday. Isbeddelladan siyaasadda waxaa lagu cusboonaysiin doonaa TPCH.net oo dhawaan ayaa la diri doonaa.
Lagu taliyay qorshaha horumarinta tayada ee Southern Arizona AIDS Foundation (SAAF) iyo talada dib u eegis maamul ee Iskaashiga Bulshada ee Arizona (CPSA).
Kulamada iyo dhacdooyinka si joogto ah loogu daro. Faahfaahinta iyo goobaha ka hel jadwalka TPCH https://www.tpch.net
Abriil 6, 9 subaxnimo
Tababbarka Dhex-galka Wakhti Halis ah: Casharka Koowaad
Abriil 7, 3pm
Isbahaysiga Dhallinyarada Hoylaawayaasha ah
Abriil 8, 9 subaxnimo
U Dhis Isbahaysiga Eber
Abriil 11, 1pm
Abriil 12, 1pm
Isbahaysiga Gaadhsiinta Bulshada
Abriil 12, 3pm
Guddiga Qiimeynta Waxqabadka Nidaamka
Abriil 13, 9 subaxnimo
Tababbarka Dhex-galka Wakhti Halis ah: Casharka Labaad
Abriil 13, 3pm
Kulanka Nidaamka Macluumaadka Maareynta Hoyla'aanta
Abriil 14, 5:30 galabnimo
Guddiga Waxqabadka Dhallinyarada
Abriil 20, 9 subaxnimo
Tababbarka Dhex-galka Wakhti Halis ah: Kalfadhiga Saddexaad
Abriil 22, 10:30 subaxnimo
Abriil 26, 3pm
Kulanka Guddiga Daryeelka Joogtada ah
Abriil 28, 1pm
Gudi iskuxiran oo isuduwe ah
Abriil 28, 5:30 galabnimo
Si aad u hesho macluumaadka kulanka ugu casrisan, booqo jadwalka TPCH https://www.tpch.net.